I-FAQ-Incwadi yokuPrinta eTshayina
Abantwana Book Printing
Oluqinile Book Printing
Board Incwadi Printing
Akhwela inxeba Book
Ukonakala & Wire-O Bound Book
yephepha & phetshana Printing
System Ihlola Quality
Fumana Custom Quote Now!!
Comic Book Yoshicilelo
Imibala Book Printing
Nokupheka Book Yoshicilelo
Ulapha : Umphandle>FAQ
No.5 Yangang Street, District Haizhu, Guangzhou City, kwiPhondo Guangdong, China
Ngawaphi amanyathelo obambiswano？
1: Sinike umbuzo nge-imeyile.
2: Intengo yexabiso lakho malunga nentengiso yethu idla ngokubakho kwi-1-2hours ngeentsuku zomsebenzi.
3: Qinisekisa ixabiso& Imizobo Sign Qhagamshelana
4: Hlawula kuqala imali isiqingatha
5: Yenza iisampuli digital simahla ekhayeni lakho yi DHL ngokukhululekileyo isiqinisekiso
6: kuphela imvume yakho isampuli sisiqalo ukuba amalungiselelo imveliso mass. ushicilelo kanye waqala, ke ayinakutshintsha kwakhona. Ukuba ufuna utshintsho kufuneka ukhusele iindleko ezongezelelekileyo.
7: Xa imveliso mass Kugqityiwe, Siya kuthatha imifanekiso ecacileyo yesoqinisekiso. Emva kokuba uqinisekisile ukuba uhlawula imali eseleyo.
8: Ukuthunyelwa elwandle okanye umoya kuxhomekeke kwiimfuno zakho.
9: Ufumana iincwadi, isivumelwano sigqibile.
Kuba amanyathelo yonke siza ziqinisekise wena ungafumana ngokukhuselekileyo kunye fast and in high iincwadi. Ukuba ukhutshiwe kwenzeka naziphi na iingxaki ngenxa yethu kule nkqubo yokushicilela, sithembise iphinda ngokukhululekileyo okanye ukubuyisela imali yakho. Ukuba iimpazamo zenzekile ukusuka esiphelweni sakho, singaphinda siphrinte ukuba uyavuma ukuhlawula iindleko ezongeziweyo zokushicilela.
Ngaba ukhetha uhlobo luni lomsebenzi wobugcisa??
Oku kulandelayo zezinye iingcebiso ezimfutshane oyibhekisa kuzo, unokubonisana nentengiso yethu, siya kukunika iingcebiso zakho zobungcali kwiincwadi zakho. Ngokwesiqhelo ukuthengiswa kwethu kuya kukuphendula kwii-1-2hours ngeentsuku zokusebenza.
1: Sithanda ubugcisa befomathi yePDF.
2: Imifanekiso i-300DPI ubuncinci.
3: Kwibala le-CMYK, hayi i-RGB. Njengoko i-RGB iya kutshintsha i-CMYK ngokuzenzekelayo kuthi. Ukuba i-CMYK siya kuqinisekisa ukuprintwa kombala ofanayo nobugcisa boqobo.
4: Ukuba umbhalo omnyama, kungcono ukuyila 100% mnyama, ayiqulisi imibala yeCMYK. Njengoko 100% umnyama ngexabiso eliphantsi kune-CMYK emnyama.
5: Igazi elipheleleyo kwicala ngalinye le-0.12inches.(3mm)
6:Guqula wonke umbhalo ube luluhlu.
Emva kokufumana ubugcisa bethu isebe lokuyila liza kujonga umsebenzi wakho wobugcisa ngononophelo ukuze liqiniseke ukuba liyiprinta kakuhle. Xa umsebenzi wakho wobugcisa ugqityiwe nceda ungathandabuzi ukusithumela nge-wetransfer okanye i-dropbox. Ukuba ezinye iingxaki zincinci abaqulunqi beencwadi zethu baya kuyilungisa ukuze uqiniseke ukuba singakwazi ukuyiprinta kakuhle.
Ngaba inkampani yakho inokubonelela ngesampulu yasimahla eqinisekisa kuqala emva koko ucwangcise ukuprintwa kobunzima?
Ewe siqinisekile ukubonelela ngeencwadi zesampula zasimahla.
Kukho ukhetho ngeendlela ezahlukeneyo:
1:Ukuba umsebenzi wakho wobugcisa awugqitywanga, siyakukhetha 1-2 Iisampulu zeencwadi ezifanayo kunye neemfuno zencwadi yakho oyifunayo. Iisampulu zethu zisimahla, udinga nje umthwalo wexabiso elincinci lokuhambisa ngenqwelomoya. Ngokwesiqhelo ihlawulwe nge-35usd ngokubhatala.
2:Ukuba umsebenzi wakho wobugcisa ugqityiwe, kwaye uqinisekisile iikowuti zethu, emva kokuba ubhatale 50% ngaphambili, siya kwenza isampulu yasimahla yedijithali yokuhanjiswa simahla yi-DHL yokuqinisekisa kwakho kuqala emva koko ucwangcise ukuprintwa kobuninzi. Fumana kuphela imvume yakho emva koko ucwangcise imveliso yobunzima.
Ukuba ukhetha thina njengomxhasi wakho wokuprinta incwadi, Siya kuqinisekisa ukuba uzifumana ngokuchanekileyo nangokuncomekayo iincwadi zakho. Siza kulawula onke amanyathelo kakuhle kwaye siqinisekise ngokucacileyo nawe. 24iyure enye ukuya kwenkonzo efudumeleyo. Ukuba unayo nayiphi na iimfuno zokuprintwa kwencwadi, ungathandabuzi ukunxibelelana nathi ngoku!
Kutheni le nto isampulu yencwadi yedijithali ingafaniyo nomgangatho wencwadi yokushicilelwa ngobuninzi?
Isampulu zineentlobo ezininzi ezinje ngobungqina bePD, incwadi yesampulu yedijithali, isampula yokushicilela okungekho mthethweni
Ngokwesiqhelo abathengi beendaba bayathanda ukubona isampulu yencwadi ukuba bayaziva kwaye bayichukumise baziva bekhuselekile uku-oda thina.
Isampulu yedijithali yenziwa ngoomatshini bokushicilela zedijithali. Umbala wokushicilela kunye nendlela yokubopha yohluke kancinane kumgangatho weencwadi zoku-odola. Ngokwesiqhelo siza kuthumela ezinye iincwadi zethu zokushicilela ezingekhoyo kunye sikuncede ugqithise umgangatho wethu wokushicilela ngomatshini kunye nomgangatho wokubopha. Ukuba ufuna umbala wethu wokushicilela wesampulu yedijithali xa ushicilelo olunzima siya kuzama ukwenza umbala ukujonga njengokwesampula yedijithali ukuba kunjalo akukho mehluko wemibala. Ukuba akusixeleli siya kuprinta ngokobugcisa bakho bokuqala xa kusenziwa imveliso enkulu.
Ngelixa isampulu yokushicilela kwe-offset yenziwa ngoomatshini abakhulu bokunikezela izinto ezifana neHeidelberg incwadi yesampulu ngokuchanekileyo njengeencwadi zokugcina iodolo. Kodwa kuyabiza kakhulu asikucebisi umthengi omtsha ukuba ayikhethe. Ukuba ungazamkela iindleko zokushicilela siyavuya ukunceda.
Siprintele ukuprintwa kweencwadi ngaphezulu kweminyaka engama-20, Kufuneka nje uxelele iimfuno zakho ngokucacileyo kuthi kwintengiso yethu iya kuqinisekisa yonke into ngokucacileyo kunye nawe phambi kwemveliso . Eyona ncwadi ibalaseleyo iya kubonisa emnyango wakho ngexesha.
Unjani umgangatho wakho wencwadi??
Ukusuka ukwenza isampulu yedijithali yokuqinisekisa-- ukuprintwa kwesiqinisekiso esingumyalezo-- kuthatha imifanekiso ecacileyo yesiqinisekiso, Silawula onke amanyathelo ngokungqongqo ukuze siqiniseke ukuba senza iincwadi ngokugqibeleleyo ngokweemfuno zakho. Siprinta ngokuthe ngqo kumzi-mveliso, Zonke izinto ezithengiswayo ziqhutywa eofisini nakumzi-mveliso mihla le, ngenxa yokukunika iincwadi ezisemgangathweni. Njengoko sisazi, uyasithemba ukuba kufuneka sikuxabise ukuthembela kwaye wenze kakuhle. Okwangoku ungumthengi phesheya, Kufuneka uhlawule imali eninzi yokuthumela kwezo ncwadi, kufuneka siqinisekise ukuba bakumgangatho ekumgangatho uphakamileyo emva koko bakhutshelwe ngaphandle. Ulawulo lweNcwadiPrintingChina esemgangathweni lubalaseleyo. Singathembisa ukuba kunokwenzeka nayiphi na ingxaki esemgangathweni okanye zishicilele iimpazamo ngenxa yethu, siyakuphinda ukuphinda siyibhale yonke okanye sibabuyise yonke imali yakho. Injongo yethu enkulu kukugcina ishishini elide kunye nawe. Ukukhetha i-BookPrintingChina njengeqabane lakho lokushicilela akunakuze kufuneke ube nexhala. Sinike ithemba, siya kukuvumela ukonwabele ukusebenza nathi.
Ungayikhetha njani indlela yokuhambisa kunye nokuba ufikelela ixesha elingakanani kubaxumi? Ukuba kunokwenzeka iphakheji yaphukile ngexesha lokuhambisa, uyabuyisela?
Zimbini iindlela zokuhambisa iimveliso ezivela eTshayina ziye emnyango wakho, ulwandle nomoya.
Ulwandle lixesha elide kodwa lixabiso eliphantsi ngeodolo enkulu, ngomoya uyakhawuleza kodwa uyabiza kwii-oda ezincinci.
Ukuhambisa iincwadi ngolwandle ukusuka eShenzhen, nceda uvumele eli xesha lilandelayo lokuhamba ngenqanawa, ukususwa ozenzele kona, kunye nokufika ngaphakathi kwilori kwindawo yakho yokugcina izinto.
Ukuya kwiindawo zaseAsia: 1 ukuba 2 iiveki
Ukuya eMzantsi Melika: 5 ukuba 7 iiveki
Ukuya e-US / eCanada: 3 ukuba 6 iiveki kuxhomekeke kwintshona(I-LA,Vancouver) okanye unxweme olusempuma(I-NYC,Toronto)
Ukuya kwiindawo eziseOstreliya: 2 ukuba 3 iiveki
Ukuya kumazwe ase-Afrika: 4 ukuba 8 iiveki
Ukuya e-UK naseYurophu: 4 ukuba 6 iiveki
Ukuba iincwadi zakho zifuna ngokungxamisekileyo, Unokukhetha nenqanawa ngomoya&Ukuchaza njenge DHL, I-FEDEX okanye i-UPS. Kuthatha malunga neentsuku ezingama-5-7 ukufika kwakho emnyango. Iindleko zokuhambisa zixhomekeka kubunzima bephakheji yakho, iindleko onokubonisana nentengiso yethu, Siza kukuphendula ngokuchanekileyo ngexabiso lakho ngokomyalelo wakho kwangoko.
Iphakheji yethu yokuhambisa yomelele ngokwaneleyo, ayizukwenzakala yaphukile. Ukuba ukhutshiwe kwenzeka nayiphi na ingozi eyaphukileyo okanye elahlekileyo, kananjalo akufuneki ube nexhala. Zonke iincwadi zakho ezithunyelwa ngumoya okanye ulwandle ziya kuthenga i-inshurensi ngexesha lonke lokuhambisa, Ukuba kuye kwakho naziphi na iingxaki ziya kuhlawula imali ngokwexabiso lakho elibhaliweyo kwi-invoice yokuhambisa.
Yeyiphi indlela yakho yokupakisha?
Sihlonipha kakhulu ingqalelo ukupakisha umgangatho. Njengoko sisazi iincwadi ziphuma ngomgangatho ofanelekileyo, kodwa iiphakheji bayoyisakala kwenzeka lula umonakalo ngexesha lonikezelo,ukuze imiphumela yokugcina 0. Into abayifunayo akuvumela ukufumana iincwadi zethu ngokukhuselekileyo fastly ukuba amazinga aphezulu thina kunye nokulungisa ngokutsha ii nathi kwixesha elizayo. Siza kulawula onke amanyathelo ukwenzela wena.
Kwinkampani yethu yonke iphakheji kufuneka iqiniseke ukuba yomelele emva koko ekhethwe yinkampani yokuhambisa. Ngaphakathi kwiplastiki manzi + 5AA ibhokisi strong + pallet eluhlaza ngokhuni + ibhanti yeplastiki eyongelwe ngaphandle.
Lithini ixesha lakho lemveliso?
Ukuprintwa kwephepha lokubuyisa iphepha kudla ngokuthatha iintsuku ezili-12, Iincwadi ezilukhuni zivame ukuthatha i-15days. Ixesha lokugqibela lokuvelisa lixhomekeke kubungakanani bakho kunye neemfuno zakho zeencwadi.
Ukuba ufuna ngokungxamisekileyo, Ndikucebisa ukuba usixelele ixesha lakho lokukhokela, njengoko usixelele ukuba uza kuba nini nomsebenzi wobugcisa wokugqibela, kwaye xa uzifuna? Ke ukuthengisa kwethu kuya kujonga kumzi mveliso kunye nenkampani yokuhambisa ukuba singadibana nexesha lakho okanye hayi. Ukuba ixesha lilungile sithatha iodolo yakho, ukuba asinakho ukuyithatha. Sithatha iodolo yakho siyakuqinisekisa ukuba uyakuyifumana 100% ngexesha. Asiyi kudala ingxaki yakho ngexesha, siya kukuvumela umzi mveliso ukhawulezise ukuvelisa imini nobusuku kuwe, kwaye oku kusimahla. Akukho ndleko zongezelelweyo.
Ngeli xesha ukuba i-odolo yakho iziswa ngobuninzi kwaye ayinakufika ngexesha ngolwandle, sicebisa ukuba uthumele inani elincinci ngomoya ngaphambi, ngelixa uphumla ukuthunyelwa ngolwandle, onokuqinisekisa ukuba ufikelela ngexesha kwaye ugcine imali.
Yintoni imigaqo yokuhlawula kunye neakhawunti?
Imigaqo yethu yokuhlawula yile 50% ngaphambili, ukuphumla okuhlawulelweyo ngaphambi kokuba kuthunyelwe ngebhanki.
Ukuba ungaphantsi kwe-2000usd ukuze ugcine imali yokudlulisela ibhanki sicebisa ukuba sihlawule ngexesha elinye.
Samkela kuphela ukhutshelo lwebhanki ngexabiso leodolo, Ungamamkeli amakhadi etyala. Kwimali yesampula engaphantsi kwe-200usd samkela ukuhlawulwa.
Ukuthengisa kwethu kuya kwenza i-PI ngazo zonke iinkcukacha zencwadi kunye neakhawunti yebhanki yokuqinisekisa. Emva kokuba uhlawule isiqingatha siza kwenza isampulu yasimahla yedijithali yokuhanjiswa nge-dhl yokuqinisekisa kuqala emva koko ucwangcise imveliso yobunzima. Xa ukugqitywa kobunzima kuya kukuthumela imifanekiso ecacileyo yesalathiso sakho emva koko uhlawula ibhalansi silungiselela ukuthunyelwa.
Landela us on Instagram
copyright © 2019 BookPrintingChina.com All Rights oyedwa.